Ciidamada dowladda oo u abaabulan hab beeleed oo maanta ku dagaalamay Jannaale (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 15, 2013 2:20 b 0
Jannaale, December 15, 2013 – Dagaalada ku salaysan beelaha ee ka socda gobolka shabeelaha hoose ee koonfurta Soomaaliya ayaa sii socda, waxaana saaka dagaalku ka bilowday degmada Jannaale ee? gobolkaas.
Gudoomiyaha degmada Jannaale Maxamed Idiris Cabdi oo la hadlay radio daljir waxaa uu sheegay in dagaalku ka bilowday deegaanka goor hore oo saaka ah.
Ciidamada dowladda ayaa kala baxay iyagoo u hubaysan hab beeleed sida uu sheegay mudane Idiris, waxaa uu xaqiijiyey in dagaalku xiriir la leeyahay kii dhowrka maalmood ka socday Aaga Marka
?Dad badan ayaa dhintay dhaawac badana waa jiraa laakiin ma jirto tiro rasmi ah oo aan ognahay hadda.? Ayuu yiri Idiris
Weli lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaas oo ah mid goos goo ah, xiisada ayaa ka jirta guud ahaan gobolka shabeelaha hoose oo idil.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda u dirtay gobolka si ay dhexdhexaadin uga sameeyaan deeganada lagu dagaalamay isla markaasna u dhex galaan dhinacyada dirirtu ka dhexayso.
Dhegeyso: – Khadra degan Xasan oo daljir ka tirsan ayaa waraystay gudoomiye Maxamed Idiris Cabdi
Booliska Kenya oo bilaabay howlgalo lagu baadi goobayo ragii ka dambeeyey weerarkii xalay